January 2018 – Kalfadhi
Wadarta guud ee miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadka 2018 oo ay diyaarisay wasaaradda maaliyadda waa $274, 630,19. Waxaa dib-u-eegis ku sameeyay kana talo-bixiyay guddiga maaliyadda ee baarlamaanka 10-aad. Miisaaniyaddan ayaa kharashaadka adeegga maamulka iyo difaaca loo qoondeeyay 94.8 boqolkiiba halka 5.2 boqolkiiba loogu talagalay mashaariicda dhinaca horumarinta sida lagu xusay warbaxin uu soo saaray guddiga odoroska miisaaniyadda qaranka . Kharashka miisaaniyadda waxaa qeyb ka ah ku-talagalka deeqaha dalal badan oo saaxiibbo la ah Soomaaliya. Dalalkaas waxaa ka mid ah Turkiga, Qatar, iyo Sacuudiga. Wadar ahaan waxa laga filayaa $62,360,000.00. Waxaa…
January 16, 2018 January 16, 2018 Kalfadhi
Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu ku dhashay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose sanadkii 1954-kii. Muddo dhowr iyo toban sano ah ayuu xubin ka yahay baarlamaanka. Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur-galbeed ayaa mar kale laga soo doortay bishii Nofeember ee sanadkii 2016. Waxbarashada & Takhasuska Degmada uu ku dhashay oo uu ku soo barbaaray ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisii hoose-dhexe. Dugsiga sare ee 15 May ee Muqdisho ayuu ka baxay sanadkii 1978. Kulliyadda luuqadaha ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed…
Miisaaniyad waxaa la yiraahdaa qorshe waqtiyeysan oo maaliyadeed oo loogu talagalay in howl lagu fuliyo. Miisaaniyaddu waxay na tusisaa dakhliga iyo kharashka waqti cayiman. Waxay udub dhexaad u tahay shaqooyinka hay’adaha kala duwan ee dowladda. Wasaaraduhu waxa ay ka mid yihiin hay’adaha gundhigga u ah shaqooyinka dowladda. Sanadkan 2018-da, wasaaradaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay tiro ahaan ka kooban yihiin 25-wasaaradood oo mid walba ay ahmiyad gaar ah u leedahay bulsho-weynta Soomaaliyeed. Miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda waxay u qoondeysaa wasaaradaha dakhli ay ku gutaan howlahooda kala duwan. Miisaaniyadda…
January 11, 2018 January 11, 2018 Kalfadhi
Aqalka Sare, waxaa uu qeyb ka yahay Baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ka kooban Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare sida ku xusan qodobka 55-aad oo qeexaya Goleyaasha Baarlamaanka Federaalka ah. Aqalka sare, waa aqal ka duwan Golaha Shacabka, waxaa uu leeyahay mas’uuliyado iyo shaqo loo igmaday. Masuuliyadaha Aqalka sare: Ka-qayb-qaadashada wax-ka-beddelidda dastuurka. Ansixinta, wax-ka-beddelidda iyo diidmada sharciyada la horkeeno iyo eegidda sharciyada loo igmaday, si waafaqsan Qodobbada 82-83 ee dastuurka. Ka-qayb-qaadashada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah si waafaqsan Qodobka 89-aad. Xil ka qaadida madaxweynaha si waafaqsan Qodobka 92-aad.…
January 11, 2018 January 23, 2018 Kalfadhi
Labada Gole ee Baarlamaanka dalka ayaa meelmariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2018-ka, taas oo ka kooban miisaaniyad dhan $274,630,191. Miisaaniyadda dowladda ee sanadkan ayaa 14-milyan ka badan tii sanadkii hore. Madaxtooyada qaranka iyo xafiiska raysul wasaaraha ayaa loo qoondeeyay miisaaniyad dhan $10,356,543 sida ku cad nuqulka miisaaniyadda ee ay diyaarisay wasaaradda maaliyadda, baarlamaankana uu ansixiyay. Xafiiska Madaxweynaha Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku talagalka Miisaaniyadda ee sanadkan 2018 wuxuu yahay $4,961,697. Lacagtaas waxay ku bixi doontaa shaqada, shaqaalaha, safarrada iyo arrimo kale. Adeegga shaqaalaha oo ay ku…
Shacabka Beled-Xaawo ayaa dhammaadkii sanadkii hore dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedeen darbi weyn oo dowladda Kenya ay dooneyso inay ka dhiska xadka Soomaaliya. Dadku waxay 22-kii Diseembar dhagaxyo kala hortageen ciidanka Kenya ee wax ka waday dhismaha darbiga. Waxay ku doodayeen in dhismaha uu gudaha u soo galay magaalada. Warkaas markii uu shaacay waxaa magaalada booqday wafdi xaqiiqo-raadin ah oo ay dirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wafdigan oo isugu jiray wasiirro, saraakiisha socdaalka oo heer federaal ah iyo kuwa dowlad-goboleedyada ayaa u kuurgalayay walaaca ay qabaan…
January 4, 2018 January 4, 2018 Kalfadhi
Haddii aad qormadaan u akhrineyso in aad ka hesho war dowladda ama madaxda Qaranka dhaawaca fadlan halkan ku jooji. Maaddaama aad akhriska sii wadday waxaan u arkaa in aad dooneyso in aad dareenkeyga ogaatid. Maanta oo ah Khamiis, taariikhdu ay tahay 4-ta January sannadka 2018, waxaan xalay aniga iyo Wasiiru Dowluhu ku daahnay howl uu Ra’iisal Wasaaruhu ii xil saaray in aan maanta isaga soo hor dhigo 9-ka subaxnimo si aan Golaha Wasiirrada u geyno galabta. Hase yeeshee qof ayaa qof saaka iga soo wacay dalka Mareykanku ayaa ii sheegay…
January 3, 2018 Kalfadhi
Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta sheegay in dhawaan loo tartami doono kursigii xildhibaannimo ee taliyihii hore ee Nabad-sugidda Qaranka, Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe. Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ibraahim Ismaacil oo magaalada Jowhar maanta kula kulantay madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe ayaa kala hadashay kursiga deegaan-doorashadiisu ay tahay Jowhar ee uu banneeyay Sanbaloolshe. Dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya in xilka xildhibaannimada uu mas’uulku weynayo haddii uu qabto xil aan wasiir ahayn. Marwo Xaliimo oo warbaahinta kula hadashay Jowhar ayaa tilmaantay in laga billaabo…
Kalfadhigii 2-aad ee xubnaha Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaana si rasmi ah u soo xiray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi. Kulanka waxaa sidoo kale lagu dhegeystay warbixinta xiisadda ka taagan degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo. Guddoomiyaha ayaa khudbaddiisa uga hadlay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka Soomaaliya. Xildhibaan Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo ka mid ahaa wafdigii xaqiiqo-raadinta ahaa ee Beled-xaawo ku weheliyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdi Faarax Juxa ayaa mudaneyaasha u jeediyay waxyaabihii ay soo arkeen. Wuxuu sheegay in 790 guri…